SADC Yoronga Musangano weKuzeya Nyaya yeZimbabwe
Sangano reSADC rinoti riri kuronga musangano mukuru wekuzeya matambudziko ari kutarisana nedunhu rekuchamhembe kweAfrica zvikuru muZimbabwe, Madagascar nemu Democratic Republic of Congo.
Munyori mukuru weSADC, VaTomaz Salomao, vaudza Studio 7 kuti pachasangana vatungamiri venyika dzemuAfrica kumusangano weAfrican Union kuAddis Ababa, vatungamiri venyika dzemuSADC vachasanganawo kumucheto kwemusangano uyu voona kuti musangano uyu ungaitwa rinhi uye kupi.
Musangano weAfrican Union uri kutanga musi wa 21 Ndira kuEthiopia.
VaSalomao vanotiwo sarudzo muZimbabwe dzinofanira kuitwa pachitevedzerwa chibvumirano chakaumba hurumende yemubatanidzwa cheGlobal Political Agreement.
Zanu-PF iri kuronga kuita zano ndega panyaya yesarudzo asi veMDC vari kuti rwendo rwuno hazviite kana pasina kuvandudzwa zvinhu zvakaita sekuburitswa kwemashoko, mitemo yesarudzo, mashandiro emapurisa nezvimwe.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinotiwo mukuyedza kwayo kubata SADC kumeso, Zanu-PF iri kutaura nezvekuvandudza mashandiro emapurisa uye nyaya yekuti vatungamiri vanzi vari kushoropodza mhirizhonga neko pasina chiri kuitika.
Masangano akazvimirira oga, achitungamirwa neCris In Zimbabwe Coalition, anoti ari kuendawo kumisangano yeAfrican Union neSADC kuitira kuti aone kuti Zanu-PF haisi kuzosiiwa ichiita madiro ajojina.
Chipangamazano cheCrisis in Zimbabwe Coalition, kuchamhembe kwe Africa, VaDewa Mavhinga, vanoti zvibvumirano zveGPA zvinofanira kutanga zvazadziswa pasati paitwa sarudzo munyika.